Hitifitra, hono, ry zareo? Mahaiza mandray hafatra!
2021-06-08 @ 14:14 in Ankapobeny
Raha nijery ity pejy Facebook iray ity aho dia nahatsikaritra fa amin'ny teny malagasy no mahazatra azy. Niova kely teto amin'ity lahatsoratra iray ity.
Tsy izay ihany fa efa nanana fanazavana amin'ny teny malagasy ihany koa io lahatsoratra io. Raha ny tena marina izany dia tokony ho tafapaka tsara ny hafatra satria tokony ho mora azo izany fanazavana izany.
Fanamarihana faharoa, ny ampitson'ny nanoratana ny teny malagasy no namoahana ny teny frantsay. Izany hoe mety hisy any fampitandremana ambadika mety tsy voarain'ny olona tsara ka hamafisina dia samy mahazo daholo na Malagasy na vahiny. Inona ary ilay tena tiana hampitaina?
Tany amin'ny fiofanana tamin'ny taranja hafa dia hafa tany no nandraisana izao hafatra izao. Raha te-hahazo hafatra miafina tiana hampitaina amin'ny lahatsoratra na fanadihadiana iray dia ny fanontaniana na fehezanteny telo na roa farany avy hatrany no jerena na vakiana.
Tsy haiko ianareo fa ny hitako dia hoe: "Afaka mampiasa ny fitaovam-piadiana eo ampelatanany ny zandary... La Gendarmerie Nationale prévoit le droit d'usage des armes..."
"Natao izao mba fampianarana farany sy ho fampitandremana... Ce communiqué est fait à titre de dernier rappel et d’avertissement."
Raha maimaika mamaky io fehezanteny farany io dia lasa mahavaky hoe "dernier avertissement" na dia tsy manondro izany aza ny lahatsoratra, ary mampahatsiahy tampoka ilay indray 7 febroary 2009 izay manao hoe "hitifitra, hono, ry zareo!"